Uxinzelelo loqhekeko olunyaweni. Ukuqonda isifo, unobangela kunye nonyango.
09 / 08 / 2013 /0 Amazwana/i unyawo, ukuphazamiseka/av ubuhlungu
Uxinezeleko. Ifoto: Aaos.org
Ukuqhekeka koxinzelelo (okwaziwa njengokuqhekeka kokudinwa okanye ukwaphuka koxinzelelo) ezinyaweni akwenzeki ngenxa yomthwalo wempazamo ngequbuliso, kodwa ngenxa yokugcwala ngaphezulu kwexesha elide. Umzekelo ngumntu ongakhange abaleke kakhulu ngaphambili, kodwa othe ngequbuliso waqala ebaleka rhoqo kwiindawo ezinzima-zihlala ziyitela Ukubaleka rhoqo kwiindawo ezinzima kuthetha ukuba umlenze onyaweni awunalo ixesha lokuphinda ubuye phakathi kweseshoni nganye, kwaye ekugqibeleni ukwaphuka okungaphelelanga kuya kubakho elunyaweni. Ikhefu loxinzelelo linokwenzeka nokuma iinyawo zakho kakhulu, kunye nomthwalo onzima ukusuka phezulu kuye ezantsi.
- Kuphi kunyawo apho kuqheleke kakhulu ukuba ufumane ukwaphuka koxinzelelo?
Ezona ndawo ziqhelekileyo ze-anatomical zisesithendeni (calcaneus), ithambo le-ankle (talus), umlenze wesikhephe (Navicularis) kunye nonyawo oluphakathi (metatarsal). Ukuba uxinzelelo loxinzelelo lwenzeka metatarsal, ke ukubiza amagama kuxhomekeka ukuba yindawo ehleli kuyo. Uxinzelelo lwefritshi kwindawo yesi-5 (ngaphandle, embindini wonyawo) babizwa ngokuba yiJones fracture, ngelixa uxinzelelo lwefratifithi kwimigca ye-3 lubizwa ngokuba yi-march fractures. Le yokugqibela ibizwa oku njengoko ihlala ivela kwimeko yokugcwala kwezinto eziphilayo ezibonakala ekuhambeni, umzekelo kwinkonzo yasemkhosini.
-Lufunyaniswa njani uxinzelelo kuxinzelelo?
Kwimeko yequbuliso, iintlungu ezizimeleyo kwindawo enye ezinyaweni-ezibi kakhulu xa uxinekile, ukukrokreleka koqhekeko loxinzelelo okanye ukudinwa kukwanda. Ukophuka kuqinisekiswa ngokusebenzisa uvavanyo lokungcangcazela kunye nokucinga, nokuba kungo-X-ray okanye ngeMRI.
- Unyango lokunyathelwa kukhathala?
Eyona nto iphambili kukuphambana koxinzelelo ezinyaweni ukuvumisa. Oku kukunika indawo leyo yonke into eyimfuneko ukuze iziphilise. Ukuba uqhubeka nokulayisha indawo kwindawo egqithisileyo, umlenze awuyi kuba nethuba lokwakha kwakhona, kwaye yonke loo nto inokukhula ibe sisangqa esikhohlakeleyo. Ngexesha leveki yokuqala, kunokuba kufanelekile ukusebenzisa iintonga ukukhulula indawo - mhlawumbi kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe imiqamelo emincinci yamathambo kwizihlangu ukubonelela ngesiqabu. Izicathulo kufuneka zibe nokukhuseleka okuhle ukunciphisa amandla e-biomechanical ahamba ngomlenze owenzakeleyo.
- Yintoni enokwenzeka ukuba andikhathali ngakwicala loxinzelelo?
Ukuba ukwaphuka koxinzelelo kuthathwa ngokungakhathali, usulelo lunokubakho kwingingqi ngokuhamba kwexesha. Oku kunokukhokelela kwiziphumo ezibi zonyango.
Kuthunyelwe ngu IVondt.net -Ingcaciso yezempilo yezihlunu. on NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2015
Izixhasi: Ngaba ikhona into endinokuyitya ukukhuthaza ukunyanga?
Ikhalsiyam kunye nevithamin D zenzeka ngokwendalo kwisakhiwo sethambo, ke unokufuna ukucinga malunga nokwanela koku. I-painsiller ze-NSAIDS zinokukunceda ukunciphisa isantya sendalo sokulimala.
Umboniso: I-X-ray yoxinzelelo lwefratheni ezinyaweni
I-X-ray yokufakelwa koxinzelelo kunyawo
Emfanekisweni sibona ukwaphuka koxinzelelo ekuthathwe i-x-rays. Kumfanekiso wokuqala we-X-ray akukho zinto zifunyanisiweyo ezibonisiweyo, kodwa uphawu lwanele, kukho iifom zobizo emva kweeveki ezi-4 kwi-x-ray entsha.
I-CT yokuqina kokudinwa / ukwaphuka koxinzelelo
Uviwo lwe-CT-inkcazo yomfanekiso: Apha sibona umfanekiso we-grade 4 yoxinzelelo lwempembelelo kumlenze we-navicularis wonyawo.
I-MRI yokufikelwa kukhathala / ukuxinana kwengcinezelo
Uviwo lweMRI-inkcazo yomfanekiso: Kwifoto sibona intshayelelo yeklasi ngokuxinana kwengcinezelo kwigumbi metatarsal.
-Ufumana njani unyango olukhawulezileyo?
Sikwakhuthaza kakhulu ukuba usebenzise uxinzelelo lwe-sock ukwandisa ukuhamba kwegazi kunyawo lwakho olimele:
IMveliso EQHUTYIWEYO / INDLELA YONCEDO: -Okunyanzeliswa sock
Isokisi yokucinezela yenziwe ngokukodwa ukunika uxinzelelo kumanqaku afanelekileyo kwiingxaki zenyawo. Ukunyanzelwa kweekawusi kunokuba negalelo ekwandeni kokujikeleza kwegazi kunye nokunyusa ukunyanga kwabo banengxaki yokuncipha kokusebenza ezinyaweni- ezinokunciphisa ukuba kuthatha ixesha elingakanani iinyawo zakho ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwakhona.
Cofa lo mfanekiso ungasentla ukuze ufunde ngakumbi ngezi sokisi.
Inqaku elinxulumene nalo: -Imithambo emi-4 elungileyo yokulwa ne-fasciitis yesityalo!
Uninzi ekwabelwana ngalo ngoku: Unyango olutsha lwe-Alzheimer lunokubuyisela inkumbulo epheleleyo!
Eminye imibuzo ebuzwa rhoqo:
Q: Ingaba unayo ikhefu lokudinwa kwi-tibia ye-tuberosity?
Impendulo: Ukwaphuka koxinzelelo kwi-tuberosity tibia akuqhelekanga kakhulu. Okona kwenzakala kuxhaphakileyo kwenzeka kule ndawo zii-Osgood schlatter's kunye infrapatellar bursitis (i-knee mucositis) -ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqha okwenzeka phakathi kwabantu abancinci, emva koko ngenxa yokuqhekeka okugqithisileyo kwamadolo okuxhobisa (amadolo akhululayo) asusa nje iqhekeza lethambo elincinci kwi-tuberositas tibia. Kumfanekiso ongezantsi ungabona apho ikhoyo i-tuberosity ye-tibia (ngesiNgesi ebizwa ngokuba yi-tuberosity ye-tibia).
Isifo sephepha seTibial - Ifoto: Wikimedia Commons
Q: Ukufunyanwa kwesifo sokudinwa kwesifo se-MRI? Ngaba kunokwenzeka ukuba uxilonge ukukhathala okunyanga kusetyenziswa uvavanyo lwe-MRI?
Impendulo: Ewe. I-MRI luvavanyo lokucinga oluchanekileyo xa kufikwa ekufumaniseni ukudinwa kwamakhwa - i-CT inokusebenza ngokuchanekileyo, kodwa isizathu sokuba umntu akhethe ukusetyenziswa kweMRI kukuba le yokugqibela ayinayo imitha. Iimviwo ze-MRI kwiimeko ezithile zinokubona ukukhathala kokuqhekeka / uxinzelelo loqhekeko olungabonakaliyo kwi-X-ray okwangoku.
Q: Ungayenza njani into yokuzivocavoca emva kokonzakala onyaweni?
Impendulo: Eyona nto ibaluleke kakhulu ekuqaleni kukunika indawo echaphazelekayo ukuphumla ngokwaneleyo ukuze ukuphiliswa kwenzeke ngendlela efanelekileyo. Ke kukho ukunyuka ngokuthe ngcembe okusebenzayo xa kufikwa kwinani lokuzilolonga. Ingcali yesifo seengcongconi (umz. umzimba okanye chiropractor) inokukunika ingcebiso oyifunayo Ngamanye amaxesha kunokuba yimfuneko footrest okanye iindawo zokugcina izikethi zokuqinisekisa ukonwaba kwendawo.
Okulandelayo: - Unyawo olubonda? Kuya kufuneka uyazi le nto!
Unyango lwe-D-Ribose ye-fibromyalgia, ME kunye nesifo sokudinwa okungapheliyo Ukunyanga / ukuvinjwa kwonyango lweentlungu ezingapheliyo